स्टेरियोड्स चक्र | व्यंजनहरू र रगतका कामहरू - एएसआरएवा
Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी .
1। पिरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड के हो? पाइरिडोक्सल हाइड्रोक्लोराइड वा भिटामिन B6 पानीमा घुलनशील भिटामिन हो जुन प्राय: खाद्य पदार्थहरूमा पाइन्छ। यो मुख्यतया एक पूरक आहार को रूपमा प्रयोग गरीन्छ। जब एक पूरकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, Pyridoxal हाइड्रोक्लोराइड उपचार गर्न वा धेरै चिकित्सा समस्याहरू रोक्न सक्छ। यो सामान्यतया इंजेक्शन द्वारा लिईन्छ, मौखिक रूपमा वा खाना पूरकमा। यदि तपाईं शरीर सौष्ठवकर्ता हुनुहुन्छ भने, यो भिटामिन […]
यौन रोग पुरुषहरूमा सामान्य मानिन्छ, र उनीहरूको लागि भाग्यशाली; त्यहाँ भियाग्रा, सियालिस र ईडी ड्रग्सबाट सबै छनौट गर्न विकल्प विकल्पहरूको दायरा छ। तिनीहरूसँग हार्मोनल उपचार पनि छ उनीहरूको सेक्स ड्राइभलाई पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न। महिलाहरू यसमा एक्लो छोडिएको महसुस गर्छन्। भाग्यवस, उनीहरूसँग विकल्पहरू पनि छन्। […]
Oxandrolone (अनावर) के हो? अक्सान्ड्रोलोन (53-39-4), यसको ब्रान्डको नामको रूपमा अनवर पाउडर, एक सिंथेटिक एन्ड्रोजन र एनाबोलिक स्टेरॉइड (एएएस) औषधि हो जुन यसको शक्ति र उर्जा - बृद्धि गर्ने क्षमताहरूको लागि धेरै लोकप्रिय छ। यो सबैभन्दा धेरै ज्ञात र प्रयोग हुने मौखिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स बीच हो। एनाबोलिकको अर्थ यो हो कि यसले सेल प्रोटिनहरूलाई बढावा दिन्छ, यसप्रकार अग्रणी […]
1.What SR9009 छ? SR9009 वा स्टेनाबोलिक एक CAS 1379686-29-9 पूरक हो जुन कार्डियो व्यायामहरूको प्रभावहरूको नक्कल गर्दछ। न केवल औषधिले तपाईंलाई तपाईंको केही अतिरिक्त शरीरमा बोसो फ्याँक्न पनि मद्दत गर्दछ, तर यसले तपाईंको सहनशक्तिलाई पनि बढावा दिन्छ जबकि धैर्यतालाई बृद्धि गर्दछ। SR9009 एक सिंथेटिक कम्पाउन्ड हो, जुन […]
यो सामान्य ज्ञान उद्देश्यहरूको लागि मात्र धेरै सामान्य सिंहावलोकन हुनेछ, कसरी गर्ने मार्गनिर्देशन होईन। यसको मतलब यो होइन कि म यसको प्रयोगलाई माफ गर्दछु न त यो प्रयोगको प्रवेश हो। स्टेरोइडहरू अक्सर गलत बुझिन्छ वा गलत वर्गीकरण गरिन्छ- विभिन्न प्रकारका स्टेरोइडहरू हुन्छन्। Corticosteroids, जो anabolic स्टेरोइड भन्दा खराब साइड इफेक्ट छन्, केहि कारणका लागि […]